ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲလေး ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲလေး ၂
ကျောက်စိမ်းအကြောင်း နဲနဲလေး ၂
Posted by မောင် ပေ on Aug 23, 2011 in Creative Writing, How To.. | 13 comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော် သိခဲ့ရတဲ့ ခုမ့် အကြောင်း ကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
အပေါ်က ပုံလေး က ကျောက်စိမ်းတုံး ပုံပေါ့ ၊ သူ့ ကို ဖြတ်ထားတဲ့ သဘော ပါ ။ ပုံ မှာ ပါသလို ပါပဲ ..။
အပေါ် ဆုံး က အခွံ ရှိပါတယ်
အခွံရဲ့ အောက်မှာ ခုမ့် ရှိပါတယ် ။
ခုမ့် ရဲ့ အောက်မှာ အသား ရှိပါတယ် ။ အရည် ဆိုတာ အသားထဲ မှာ ရှိတဲ့ ဟာပါ ။ အရောင်ပေါ့ ။
ခုမ့် ဆိုတာ အခွံ နဲ့ အနှစ် ကြား မှာ ရှိတဲ့ အလွှာလေးပေါ့ ။
ကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံး ကို အလယ် က ထက်ခြမ်းခွဲ သလို မြင်ကြည့်လိုက်ပါ ။
ကြက်ဥ ခွံ က အခွံ ပေါ့ ။ ( မနေ့ က ကျွန်တော် တင်ခဲ့တဲ့ ယမ်း ဆိုတာအခွံ မှာ ရှာရတာပါ ။)
ကြက်ဥခွံ အောက် က ဖြူဖြူလေးတွေ က ခုမ့် လို့ မှတ်ပါ
ကြက်ဥ အနှစ် က တော့ အသားပေါ့ ။ ဒီလောက် ဆို ကျောက်စိမ်းတုံး တစ်တုံး ပုံ ကို မြင်မိကြမှာပါနော် ။
“ ခုမ့် ” ရဲ့ အရောင် ကို ကြည့်ပြီး ကျောက်စိမ်း အရည် ကို ခန့် မှန်း နိုင်ပါတယ် ။
ဒီကျောက်ပုံ မှာ အဖြူရောင် အစက်ကလေး တွေ ၊ အချောင်းပုံလေး တွေ တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
အဲဒါ က ယမ်းပါ ။
သေးသေးလေးတွေ က ယမ်းလုံး ၊ အချောင်း လေးတွေ က ယမ်းချောင်း ၊ ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ ၊ အထက်အောက် ပြေးနေတဲ့ အဖြူ စင်းကြောင်းကြီး ကို တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
အဲဒါ က ရှောင်ရမယ့် ၊ ဈေးနှိမ်ရမယ့် သင်္ကေတ “ ခွေးရိုးထိုး ” ပါ ။
ခုမ့် အကြောင်း ကို ဆက်ပြောပါမယ်
“ ခုမ့် ” အရောင် ကို ကြည့်ပြီး ကျောက်စိမ်း အရည် ကို ခန့် မှန်း နိုင်ပါတယ် ။
များသောအားဖြင့် “ ခုမ့် ” ပါသော ကျောက်များသည် “ အရည်ကျောက် ” ဖြစ်ပြီး ၊ “ ခုမ့် ” မပါတဲ့ ကျောက်တွေ ဟာ “ အသားကျောက် ” ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
“ ခုမ့် ” မပါတဲ့ ကျောက်ဟာ မျိုးနုတတ်သည် ။ ဒါပေမယ့် ကျောက်တိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီ “ ခုမ့် ” ကို နားလည် မယ် ဆိုရင် ကျောက်ရဲ့ အရည် ကို အနီးစပ်ဆုံး ခန့် မှန်းနိုင်ပါတယ် ။
ခုမ့် အရောင်တွေ က တော့
ခုမ့်ဖြူ ( အဖြူရောင် ) = ပဲရည်သန့် သန့် ဖြစ်တတ်သည် ။ အမျိုးကောင်း အရည်ကောင်း ရတတ်ပါတယ် ။
ခုမ့်ဝါ ( အဝါရောင် ) = အမျိုးကောင်းတဲ့ ခုမ့် ပါပဲ ။ အရည်ကောင်း ရတတ်ပါတယ် ။ ပဲဆွေးလု အရည်မျိုးကို ပေးတတ်ပါတယ် ။
ပျားရည်ခုမ့် (သို့ ) အနီ ရောင် = အမျိုးကောင်းတယ် ။ ခုမ့် ဝါ လို ပဲ အရည်ကောင်း ရတတ်တယ် ။
ခုမ့်ညို = ခုမ့်ဟာ အညိုရောင် ဆိုရင် အရည် ပြာတတ်တယ် ။ ( ပြာတယ် ဆိုတာ ကျောက်စကားပါ ။ အပြာရောင် ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ ။ အစိမ်းပုပ် ရောင် ကို ပြောချင်တာ ပါ ) ။ လန့် ရည် ဝင်တယ် လို့ လဲ ပြောကြပါတယ် ။
ခုမ့်မည်း ( အနက်ဘက်သမ်း တယ် ) = ခုမ့် မည်း ရင် အရည် ကျွမ်းတတ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် အသား က ကောင်းမယ် ဆိုရင် ၊ မီးနဲ့ သေချာ ထိုးကြည့်လို့ စိမ်းပြ ရင် ၊ Black jade ပါ ။
( Black Jade ဆိုတာ ၊ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းအောက်မှာ ထောင်ကြည့်ရင် အစိမ်းရောင် ပါ ။ ဒီအတိုင်း ချထားပြီး ကြည့်ရင် အမဲရောင် )
“ ခုမ့်ပါး ” = ခုမ့် ဟာ ပါးတယ် ။ ခုမ့်ပါး ရင် အရည်ကောင်းတတ်တယ် ။ အရည်ကျောက် တွေ မှာ ကြည့်ရင် ခုမ့် ဟာ ပါးပါးလေး ။“ ခွံဘိ ” = မည်သည့် ခုမ့် မဆို ခုမ့်က ထူနေရင် “ ခွံဘိ ” လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ခုမ့်တက် တယ် လို့ လည်း ပြောကြပါတယ် ။
ဒီပုံလေးထဲမှာ တော့ “ ခုမ့်ဝါ ” ကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
ဒီလောက် ဆိုရင် “ ခုမ့် ” အကြောင်း ကို သိကြလောက်ပါပြီ နော် ။
ကျွန်တော် ရေးတာတွေ က တော့ စာတွေ့ တွေ ပေါ့ နော်
တစ်ကယ် ၁၀၀ % တတ်သိနားလည် ဖို့ ကတော့ ၊ ဒီစာ နဲ့ တင် မလုံလောက်ပါဘူး ။
ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ကျောက်ဝိုင်း များ မှာ သွားပြီး ၊ စာနဲ့ ကျောက်နဲ့ တွဲလေ့လာ မှ တတ်ကျွမ်း လာမှာပါ ။
ကျွန်တော် ရေးတင်တာကတော့ ကျွန်တော် သိသလောက်လေးတွေ ကို ပြန်ဝေမျှ ပေးတဲ့ သဘောပါ ။
စာဖတ်သူ များ နဲ့ ဂေဇက်ဝင် များထဲ မှ တတ်ကျွမ်းနားလည် သူ များ အနေ နဲ့ လည်း ဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် က တော့ အခုမှ စလေ့လာ နေတဲ့ သူ ပါ ။
အာရုံ စူးစိုက်ပြီး တစ်ကယ်ကြိုးစားလေ့လာ ရင် ၊ ၆ လ တစ်နှစ် နဲ့တတ်ကျွမ်း လာနိုင်တဲ့ ပညာရပ်ပါ ။ ( စာတွေ့ ၊ လက်တွေ့ )
အခု ဆိုရင် ကျွန်တော့် စာဖတ်ကြသူ တွေ ဟာ အနည်းဆုံးတော့ ယမ်းအကြောင်း နဲ့ ခုမ့် အကြောင်း ကို သိရှိပြီးလောက်ပါပြီ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတော့ ကျောက်စိမ်း အကြောင်း ပြောလာရင် နဲနဲပါးပါး ဝင်ဆွေးနွေးလို့ ရမှာပါနော် ။
နောက်နေ့ တွေ မှ ……ဆက်လက်ပြီး တင်ပေးပါဦးမယ် ။
အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပါ။ဒါပေမယ့်. ဒီနေ့ ထိ ကောင်ကောင်း မမှတ်မိပါဘူး။ပြန်ဖတ်ရပါမယ်။မနေ့ ကတော့ ဖတ်တာမှတ်မိတာက အိမ်တွေမှာ ခင်းလာကြတာတို့ နောက် ကားကူရှင်မှာ သုံးစွဲလာတာတို့ အဲလောက်ဘဲ မှတ်မိပါတယ်ရှင်။ဥာဏ်က လဲ ခပ်ထိုင်းထိုင်းပါ
စာတွေ့အနေနဲ့ ရှင်းလင်းပါတယ်ဗျား.. ဒီအတိုင်း ဆက်ရေးနိင်ပါတယ် .. ဘာမှ မသိတော့ မဆွေးနွေးတက်ဘူးနော်…………ကျေးဇူးပဲ…..
ဒါလဲ..ပညာ ဒါနပဲ ကိုပေရဲ့….
လောလောဆယ်တော့….ဗိုလ်ချုပ်အမှတ်တရတို့ ..ကျောက်စိမ်းအကြောင်းတို့ က..
အုန်းပင်အောက် ရောက်နေတဲ့.. ကောင်လေးကော..
သူ့ ဘောင်းဘီပြန်တွေ့ ပြီလားဗျ..
ဒီကိစ္စ ဒီလို မရဘူး.. ရဲစခန်းကို အမှု တိုင်ထားတယ်။ စခန်းမှူးက သူလည်း မူးအောင် သောက်ပြီး အုန်းပင် အောက်မှာ သွားထိုင်စောင့်ဖမ်းတာ အခုထိ ခြေရာ လက်ရာ မတွေ့သေးလို့ စောင့်နေတယ် ကြားတာပဲ။
copy ပြီး word နဲ့ save ထားတယ်။ အားလုံး ပြီးမှ နောက်တကြိမ် အစအဆုံး ပြန်ဖတ်နိုင် အောင်ပါ။
ဒီကျောက်စိမ်းအကြောင်း အချို့အချက်အလက်တွေဟာ ကွဲလွှဲနေပါတယ်၊ ခုမ့် ဆိုတာ တရုတ်အခေါ် ဟုန် = Hong (အနီရောင်) က လာတာပါ၊ ကျောက်စိမ်းသားရဲ့ အပေါ်ယံအလွှာမှာ အနီရောင်စွဲနေလို့ ခုမ့် (ဟုန်) လို့ခေါ်တာပါ။ အနီ၊ အ၀ါ ၊ အညို ရောင်တို့ ပါနေမှ ခုမ့်လို့ခေါ်ကြတာပါ (ခုမ့်နီ ၊ ခုမ့်ဝါ ၊ ခုမ့်ညို ပေါ့)။ အဖြူရောင်၊ မဲစိမ်း (Black Jade)၊ ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင် စတဲ့ အခြားအရောင်တွေပါတဲ့ ကျောက်တွေကို ခုမ့်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး၊
ကျောက်စိမ်း အရည်အချင်းကို အဓိကထားကြည့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ် ( ကျောက်သား ၊ အရောင် ၊ အလင်းဖောက်အား )၊ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပါတဲ့ အရည်ကျောက် ဆိုတာ အရောင် (color) ကို ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (“ ခုမ့် ” ရဲ့ အရောင် ကို ကြည့်ပြီး ကျောက်စိမ်း အရည် ကို ခန့် မှန်း နိုင်ပါတယ်) လို့ အထက်မှာဆိုထားပါတယ် ။ အရောင်နဲ့ အရည် ဟာ အတူတူပါ။ အခွံကို ဖောက်ထားပြီးသား ကျောက်တတုံးရဲ့ အရည် (အရောင်)ကို ခန့်မှန်းနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
မဖြတ် မတောက် မဖောက်ရသေးတဲ့ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးကိုမှ ထွက်တဲ့မှော် ၊ အခွံမှာပါတဲ့ အပွေးမှန်း ၊ အရည်မှန်း ၊ အသားမှန်း၊ အခွံရဲ့အရောင်၊ ယမ်းချောင်း သေး ၊ ရှည် ၊ အနု ၊ အရင့် ပေါ်မူတည်ပြီး ကျောက်သား ကောင်းမကောင်း ၊ ကျောက်သား နု ရင့် ၊ အရည် (အရောင်) ပါမပါ ၊ ကောင်းမကောင်း ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်ကြတာပါ၊
Black Jade ဆိုတာက အစိမ်းရောင်ကနေ ကျွမ်းပြီး အမဲရောင်ဖြစ်သွားတာပါ၊ ဒါကြောင့် မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင် အမဲရောင် ဓါတ်မီးနဲ့ကြည့်ရင် အစိမ်းရောင်အဖြစ်မြင်နေရတာပါ၊
မောင်ပေ အရှေ့ က တလွဲတွေ ရေးသွားရင် အနောက်က ပြန်ပြင်ပေးမဲ့လူပေါ်လာဘီ
မျှဝေပေးတည်းလူရော ဝေဖန် အကြံပေး အမှား ပြင်ပေးတည်း လူရော ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို..
ဆက်လက်ပြီးလည်းေ၇းပါဦး တော်ကြာ လှမ်းမှာ ကျောက်စိမ်း တွေ.ရဲသားနဲ. ကျော်ခွသွားမိမှာဆို.လို..
မင်္ဂလာပါ ဂျက်စမင်း ရေး
ပထမ ပို့ စ်လေး ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး လို့ 
ဂျက်စမင်း ကို ပြောချင်ပါတယ် နော်
http://myanmargazette.net/63283/creative-writing က လင့်ခ်ပါ
ခုမ့် က တရုတ် စကား ဟုန့် ကို မွေးစားထားတာပါ
ဟုန့် ဆိုတာ အမှေးပါး လို့ ဗမာလို အဓိပ္ပါယ် ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ်
ကျွန်တော် အခု ရေးနေတာ က
တက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်စိမ်းပညာသင်တန်း က သင်ခဲ့ရတာတွေ ကို
သင်တန်းကြေး ၈သောင်းကျပ် ပေးရပါတယ်
ကွဲလွဲ တာတွေ တော့ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်
ကောက်ပို ရေ ၊ သောက်ငိုချင်ပ
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အစစ် ဖြစ်ရမှာ အမှန်
ရှေ့ မကြည့် ၊ နောက်မကြည့်
ရမ်းသမ်း ၀င်ခနဲ့ တာမျိုး တော့
BJ ဟာ သူ့ တန်ဘိုး နဲ့ သူ ဈေးကွက် တစ်ခု ရှိပါတယ် ။
ခုမ့် ကို ကြည့်လို့ မည်းနေရင် ၊ မီးနဲ့ ထိုးကြည့်လို့ စိမ်းရောင် တွေ့ ရင် ၊ဘလက်ဂျိတ်ပါလို့ ရေးထားပါတယ်
ယမ်း အကြောင်း ကို တော့
ပထမ ပို့ စ် မှာ ရေးခဲ့ပြီး ပါပြီ
ပို့ စ်ခေါင်းစဉ် မှာ ကို က ` ကျောက်စိမ်းအကြောင်းနဲနဲလေး ၂ ´ ဆိုပြီး တပ်ထားတာ က
ရှေ့ မှာ တစ်ခု ရေးပြီးသား မို့ ပါ လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ ။
ကျွန်တော် အဓိက ကျောက်စိမ်းပညာ သင်တန်း တက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် ဟာ
` ကျောက်စိမ်း အရည်အချင်းကို အဓိကထားကြည့်တဲ့ အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ် ( ကျောက်သား ၊ အရောင် ၊ အလင်းဖောက်အား )၊ ´ ခြုံငုံပြီး ပြောသလို မျိုး မဟုတ်ပါ ။
တစ်ခု ချင်း စီ ၊ တစ်ချက် ချင်းစီ ကို အသေးစိတ် သိချင်လို့ တက်နေတာပါ ။
ပြီး…..ကိုယ်သိခဲ့ ၊ သင်ခဲ့ ၊ တတ်ခဲ့ ရ သလောက် ကို ပြန်ပြီး ဝေငှပေးနေတာ ပါ ဆိုတာ ကို နားလည်စေချင်ပါတယ်နော် ။
ကျောက်စိမ်းအကြောင်း ကို အသေးစိတ် သိပြီး သူ တွေ အတွက် ၊ ကျွန်တော့် ပို့ စ် ဟာ မိချောင်းမင်း ရေခင်း ပြသလို ဖြစ်မှာပါလို့ လဲ ပထမ ပို့ စ် မှာ ၀င်ခံ ထားပါတယ် ။
ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာထဲ မှာကျောက်စိမ်းလည်းပါတယ်…